Blog of Nyein Chan Yar: 2006.10
နိုင်ငံ့အရေးအတွက် လှုပ်ရှားသူ၊ သူတို့
စစ်အာဏာရှင် ရဲ့ ကျည်ဆန်တွေကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ကြတယ်။
ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို
အမြဲစောင့်ကြည့်ခံ၊ တားဆီးနှောင့်ယှက် ခံခဲ့ကြရတယ်။
မျိုးဆက်သစ်ဟာ လွတ်လပ်မှုတေးသွားကို ကျူးရင့်နိုင်ဖို့
ပြည်သူလူထု အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ကြတယ်။
မျိုးဆက်သစ် အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ကြတယ်။
မိုးခါးရေတွေကို ပျော်ပျော်ကြီး သောက်နေကြဆဲလား။
Posted by dathana at Sunday, October 29, 20063comments:
ဆရာ မောင်ဝဏ္ဏ နဲ့ဆရာ အော်ပီကျယ် တို့ရဲ ကာတွန်းပုံလေးတွေက ယနေ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို ပြောနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by dathana at Friday, October 27, 2006 1 comment:
ဒီနေ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ (၄၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့၊ အဖြူရောင် ဖေါ်ပြချက် လှုပ်ရှားမှု (White Expression Campaign) နောက်ဆုံးရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်မှာတော့ ဒီလှုပ်ရှားမှု ကို ဒီ့ထက်ကြာကြာ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းမဟုတ်တောင် တစ်ပါတ် တစ်ရက်ပေါ့။ လူတွေရဲ့ ပါဝင်မှု ဒီ့ထက် ပိုရှိသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော်ဆို အနက်ဝတ်တာပဲများတာမို့ အဖြူရောင်အင်္ကျီလေး ခပ်ဟောင်းဟောင်း တစ်ထည်ပဲရှိတာ၊ ဒါပေမယ့် အရေးမကြီးဘူး ဒီရက်မှာ အဖြူဝတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ၀တ်တာပဲ။ အဲ့လို လူတိုင်းဝတ်သင့်တယ်။ လမ်မပေါ်မှာ အားလုံး အဖြူဝတ်ထားတာ မြင်ရင် ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေ တုန်လှုပ်သွားစေရမယ်။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ (ကို)ကိုကိုကြီး၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမင်းဇေယျာ၊ ကိုပြုံးချို တို့ အပါအ၀င် အဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ။ ကိုမင်းကိုနိုင် ပြည်သူလူထုနဲ့အမြန်ဆုံး လက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပါစေ။ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကိုမင်းကိုနိုင် ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ရှုံးနိမ့်ပါစေ။
Posted by dathana at Wednesday, October 18, 2006 1 comment:
ကိုသက်ဝင်းအောင် ထောင်ထဲမှာ ဆုံးသွားပြီတဲ့။ ထောင်ထဲမှာ ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားနေတာမို့ Amnesty International လိုနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက လွှတ်ပေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုနေခဲ့ပေမယ့် လွှတ်မပေးခဲ့ကြဘူး။ အခုတော့ ထောင်ထဲမှာ ဆုံးရှာပြီ။ ဒီနေ့မနက်က ဒီသတင်းကိုကြားတော့ ရင်ထဲမှာတော်တော် ခံစားရတယ်။ ကိုသက်ဝင်းအောင်ဟာ ကျွန်တော် သိကျွမ်း ရင်းနှီးသူ မဟုတ်ပေမယ့် နိုင်ငံ့အတွက် ထောင်ထဲမှာ အသက်ကိုတောင် ပေးဆပ်သွားသူမို့ ကျွန်တော်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ခံစားရသလို ပြည်သူအများစုလည်း ခံစားရမှာပါပဲ။
သန်းရွှေနဲ့ နောက်လိုက်အပေါင်းကတော့ သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဒီလို အမှုများစွာအတွက် သေရင် အ၀ီစိငရဲကနေ ဘယ်တော့မှ လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ "နောက်လိုက်" ဆိုတဲ့အထဲမှာ ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ် အဓွန့်ရှည်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်ပတ်သတ်နေတဲ့သူ တွေနဲ့၊ နဲနဲလေးမှ မဆန့်ကျင်ပဲ ပျော်ပျော်ကြီးနေ နေသူအားလုံးပါ ပါတယ်။
ကိုသက်ဝင်းအောင် ကောင်းရာသုဂတိလားမှာပါ။ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းကျောင်းသားအပေါင်းက ကိုသက်ဝင်းအောင် ကိုကြိုဆိုကြမှာပါ။ ပြည်သူအားလုံးကလည်း ကိုသက်ဝင်းအောင်ကို ရင်ထဲက ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Posted by dathana at Tuesday, October 17, 20065comments:
Posted by dathana at Sunday, October 15, 20062comments:
Posted by dathana at Wednesday, October 11, 2006 1 comment:
I couldn’t surf the web much these days and thus I couldn’t reach all new Myanmar blogs. Today I reached to Generation96 blog after roaming 7monkeys’ blog. Generation96 is quiteanew blog created last month. You can read detail description of 1996 September Students uprising at that blog. I’m thankful to Generation96 blogger for writing the true history. Until now there are four posts with description of day by day events. I think it is to be continued.
Very soon after the US car left, the army sent open trucks right beside us. Another row of soldiers were set up in front of the trucks. The riot police were sent to guard our left, which actually was nothing butapavement and the wall which we were no fool to climb upon. The back row was took over by the army and another row of soldiers coming down in front of us and stood justastep before our front line. The situation was pretty bad. We shifted all the girls in the center and all the big guys at the far ends. I was on the third row from the right. It was now us, the line of soldiers, the trucks, and the line of soldiers. Every single soldiers was equipped the same and standingastep away from us.
Posted by dathana at Monday, October 09, 2006 1 comment:
ဒီနေ့ မင်းရဲ့ဓါတ်ပုံကို ထုတ်ကြည့်နေမိတယ်၊ နမ်းလည်း နမ်းလိုက်သေးတယ်။
မကြာသေးခင်ကလို့ ပြောရခက်လောက်အောင်၊ ကိုယ့်အတွက် အချိန်တွေ ရှည်ကြာလွန်းတယ်။
မင်းရဲ့အသံလေးကိုလည်းအရမ်းလွမ်းနေတယ်လေ။ ဒီကမ္ဘာကြီး ဘာလို့ရပ်တန့်နေရတာလဲ။
မင်းမရှိလို့ ကိုယ့်ဘ၀ထဲက လစ်ဟာနေတာတွေကို အခြားအရာတွေတိုင်းမှာ လိုက်ရှာကြည့်နေမိတယ်။
ဒါအချစ်သီချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားသက်သက်ပါ။
မင်းကြားမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် တစ်ချက်လောက် ပြုံးပါ။
မြစ်တစ်စင်းအဖြစ်နဲ့လည်း ကိုယ့်အတွက် စီးဆင်းလှည့်ပါဦး။
လိပ်ပြာလေးအဖြစ်နဲ့လည်း ကိုယ့်အတွက် ပျံသန်းလှည့်ပါဦး။
ပန်းပွင့်လေးအဖြစ်နဲ့လည်း ကိုယ့်အတွက် ဖူးပွင့်လှည့်ပါဦး။
ရေး/ဆို/သံစဉ် - Şebnem Ferah
I have no mood at all to blog these days. here are two song lyrics I translated. It's not as good as original lyrics when I read my translation again :( these are beautiful songs of Şebnem Ferah. I couldn't post the songs here for my internet connection is sooooooo slow :'(
Posted by dathana at Saturday, October 07, 2006 1 comment:
ဒီနေ့ နိုးစက်သံမမြည်ခင် နိုးလာခဲ့တယ်။
မနေ့က မိုးသက်လေပြင်းလည်း ငြိမ်သက်သွားချိန်
ရွာသွန်းမိုးတွေ ဆေးကြောပေးခဲ့ နေရာတိုင်းလှပနေချိန်ပေါ့။
ကိုယ်ဟာ တောအုပ်ထဲက သစ်ပင်တစ်ပင်၊
ပင်စည်ပေါ်မှာ ကိုယ့်နာမည်ရေးထွင်း ထားသူပါ။
အဖူး အငုံတွေဝေစီ၊ မိုးဦးကို စောင့်မျှော်နေရဆဲပေါ့၊
ကိုယ့်နုတ်ခမ်းပေါ်က မင်းရဲ့ အငွေ့အသက်လေးတွေ ကတော့ ပင်လယ်ကိုပြန်လေပြီ။
နှလုံးသားထဲက မင်းအတွက် အရာရာကာကွယ်ပြီး ချစ်ခဲ့တယ်လေ။
Not: İşte bu şarkıyı bırmancaya çevirdim ben. Umarım çok hata yapmamiştim :P
Labels: emotional, lyrics
ညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံကို မိုးကြိုးပစ် ဒီဗွီဘီ ။ ၄ ။ အောက်တိုဘာ ။ ၂၀၀၆ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ ညပိုင်းက မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ညောင်နှစ်ပင် ညီလာခံကျင်းပရာ အဆောက်အဦကို မိုးကြိုးပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အဆောက်အဦ အကာအရံတချို့နဲ့ပေါ်လစီ ဆိုင်းဘုတ်တွေ မြေပေါ်ပြုတ်ကျပြီး ပျက်ဆီးသွားကြောင်း သိရပါတယ်၊ ည (၉) နာရီခွဲ လောက်မှာ လေပြင်းတိုက်ပြီး မိုးကြိုးပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ညီလာခံကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ခန်းမကြီးဘေးမှာ စိုက်ထူထားတဲ့ “လက်တွဲဝန်းရံ အမျိုးသားညီလာခံ၊” ဆိုင်းဘုတ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့ မိန့်ခွန်းတချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားတဲ့ “စစ်မှန်သော မျိုးချစ် စိတ်ရဆကသအားတ်” ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ညောင်နှစ်ပင်စခန်း ဂိတ်ပေါက်ရှေ့က ဆိုင်းဘုတ်တို့ မြေပေါ်ပြုတ်ကျပြီး ပျက်ဆီးသွားကြောင်း မျက်မြင် တွေ့ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေ တည်းခိုလေ့ရှိတဲ့ အိပ်ဆောင်တွေနဲ့ ရုံးအဆောက်အဦ မှန်တံခါးရွက်တွေလဲ ပြိုကျ ပျက်ဆီးသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ညီလာခံပြန်စဖို့ ရက်ပိုင်းသာ လိုတော့ပြီး ကိုယ်စားလှယ်တချို့လဲ ရောက်ရှိနေတာကြောင့် အပျက်အဆီးတွေကို သက်ဆိုင်ရာက အပူတပြင်း ပြင်ဆင်နေကြောင်းလဲ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။
Posted by dathana at Saturday, October 07, 20063comments:
အစကတော့လေ ဒီတစ်ပတ် ကဗျာအဖြစ်နဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ပြီးတင်မလို့ပါပဲ။ အခုတော့ ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြန်လွှတ်မပေးသေးတာ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တော်တော် စိတ်ပူနေမိပါတယ်။ romanticism ဘာသာပြန် စာသားအစား ကျွန်တော် အရင်တစ်ခါ တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မာရု ရဲ့ တိုင်းပြည် ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။
following is just for preview. read complete poem here.
Posted by dathana at Sunday, October 01, 20064comments: